Warbaahinta Streamland waxay ku dhawaaqeysaa Ujeedada ah inay ka hesho Technicolor Post Business Technicolor | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Warbaahinta Streamland waxay ku dhawaaqeysaa Ujeedada ah inay ka hesho Technicolor Post Business Technicolor
Streamland Media, oo horey u ahaan jirtay Sawirka Head Holdings LLC, waxay gashay heshiis ay ku kasbato ganacsiga Technicolor Post. Dheeraadkani wuxuu ku dul dhismaa shabakadda caalamiga ah ee Streamland ee hibada abaalmarinta, taas oo sii xoojineysa u heellaniddooda hal-abuurnimo, hal-abuurnimo iyo iskaashi muhiim u ah soo-saarka boostada. Soo iibsiga, oo ku xiran shuruudo xirmeedyo dhaqameed, waxaa taageeray Trive Capital iyo Five Crowns Capital waxaana la filayaa inuu xirmo qeybta hore ee 2021.
xarunteeduna tahay magaalada Los Angeles, Streamland Media waxay ku shaqeysaa iyada oo loo marayo cutubyo ganacsi oo isku dhafan adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha warshadaha Picture Shop, Formosa Group, Ghost VFX, Sawirka Madaxa, Kooxda Beeraha, iyo Finalé Post. Ganacsiyadan kaladuwan waxay taageeraan filim muuqaal ah, episodic, isdhexgal iyo qaabab madadaalo iyagoo soo bandhigaya heerar sare, xalal habaysan oo ku saabsan sawirka iyo dhammeynta codka, saamaynta muuqaalka iyo suuqgeynta. Ku darista Technicolor Post waxay xoojin doontaa diiwaanka caanka ah ee Streamland ee tayada waxayna balaarin doontaa qaabka gaarka ah ee ay shirkaddu u leedahay la kulanka baahiyaha macaamiisha ee gobollada adduunka oo dhan oo ay ku jiraan US, Canada, Europe iyo UK.
Ganacsiga Technicolor Post wuxuu ku midoobi doonaa faylalka shirkadda Streamland Media ee ganacsiyada aadka loo qadariyo. Ma jiri doono wax carqalad ah oo ku saabsan adeegyada abaalmarinta ku guuleysta ee macaamiisha Technicolor Post inta lagu guda jiro isdhexgalka, dhammaan shaqaalaha u heellan Technicolor Post waxay qeyb ka noqon doonaan macaamilkan.
“Kooxdayadu waxay u heellan yihiin hal-abuurnimo heer sare ah iyo guulahooda muuqda waxay u oggolaatay Streamland Media inay dhisto qoyskan gaarka ah ee ganacsiyada ganacsiga leh,” ayuu yiri madaxa shirkadda Streamland Media Bill Romeo. “Waxaan ku faraxsanahay inaan helno heer aan caadi aheyn oo ay ku soo biiraan farshaxanada Technicolor Post. Ku darida teknoolojiyada Technicolor Post iyo goobaha aduunka oo dhan Streamland ayaa noo ogolaan doonta inaan lashaqeyno dhamaan macaamiisheenna xitaa heer aad u sareeya. Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa soo socda. ”
"Qaabka Streamland wuxuu ku saleysan yahay falsafad muddo-dheer ah oo qiimeysa dhaqamadeeda kala duwan isla markaana kobcisa iskaashiga dhinac walba," ayuu yiri David Stinnett, oo bahwadaag la ah Trive Capital. “Tani waxay ahayd aasaaska guusha shirkadda oo aan si xamaasad leh u taageersanahay. Waxaan ku faraxsanahay in aan sii wadno u adeegidda bulshada wax soo-saarka kadib iyada oo la siinayo deeqo dhameystiran oo si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahida macaamiisha ee adduunka.
Jeffrey Schaffer, aasaasaha iyo lammaanaha shuraakada ah ee Five Crowns Capital, ayaa ku celcelinaya dareenkaas. "Iyadoo loo marayo jihada kooxda fulinta iyo guddiga Streamland Media, waxaan saadaalineynaa mustaqbal ifaya oo ku saabsan isbeddelka wax soo saarka boostada marka la dhammeeyo heshiiskan."
“Iibka istiraatiijiga ah ee Technicolor Post waa qeyb ka mid ah aragtideena muddada-dheer ee Adeegyada Soo-saarista Technicolor si diiradda loo saaro VFX iyo animation loogu talagalay warshadaha madadaalada, iyo adeegyada hal-abuurka iyo teknoolojiyada ee warshadaha xayeysiinta, kuwaas oo siiya qiimaha ugu badan macaamiisheena. Waxaan sii wadi doonaa inaan diirada saarno arimahan aasaasiga ah iyada oo loo marayo istuudiyahayaga hal abuurka leh ee The Mill, MPC, Mr. X iyo Mikros Animation, ”ayuu yiri Richard Moat, oo ah madaxa Technicolor.
Ku saabsan Streamland Media
Streamland Media, oo horay u ahaan jirtay Sawirka Head Holdings LLC, waxay ku shaqeysaa iyada oo loo marayo ganacsiga ugu horreeya ee wax soo saarka boostada adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Sawirka Dukaanka, Formosa Group, Ghost VFX, Sawirka Madaxa, Kooxda Beeraha, iyo Finalé Post. Ganacsiyadan isku dhafan waxay taageeraan muuqaalka filimka, episodic, isdhexgalka iyo qaababka soo-baxa ee madadaalada iyagoo siinaya tayo sare, khibrad farsamo iyo xalal habaysan oo ku saabsan sawirka iyo dhamaynta codka, saamaynta muuqaalka iyo suuqgeynta Xarunteeduna tahay Los Angeles, Streamland Media waxay bixisaa meelo badan oo adduunka ah oo dhan Maraykanka, Kanada, Yurub iyo Boqortooyada Midowday oo diiradda saaraya bixinta qaab gaar ah, qaab goboleed si loola kulmo baahida macaamiisha.
Technicolor waa hogaamiye caalami ah abuurista iyo gaarsiinta bilaa cilmiga ah ee khibradaha madadaalada aan caadiga ahayn. Iyadoo lagu mideynayo farshaxanka hogaaminaya warshadaha hal-abuurnimo heer caalami ah, shirkadda iyo qoyskeeda istuudiyaha hal-abuurka ah waxay ka caawiyaan sheeko-yaqaannada inay keenaan himilooyinkooda hamiga badan ee nolosha.
Previous: Teknolojiyada 'Evolve Technology' waxay ku darsataa Mo-Sys StarTracker jadwalka alaabada iyo tababarka
Next: Hubinta waxay bixisaa aqoon isweydaarsi ku saabsan la qabsiga waxbarashada muusikada ee loogu talagalay 'COVID' iyo 'Dante' inta lagu gudajiray NAMM 2021